Mahdi Guuleed oo Muqdisho ka daah furay shir muhiim ah, Sawirro. – Hornafrik Media Network
Mahdi Guuleed oo Muqdisho ka daah furay shir muhiim ah, Sawirro.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ayaa maanta daah furay madasha sedaxaad ee siyaasadda dhaqaalaha Qaranka, kaas oo maanta iyo berri ka socon doona magaalada Muqdisho.
Madasha ayaa waxaa soo agaasimay golaha dhaqaalaha Qaranka oo dawladda kala taliya arrimaha dhaqaalaha dalka, iyada oo lagu salaynayo cilmi baaris dheer iyo cadaymo, sidoo kalana dawladda siiya talo iyo hagid ku aadan diyaarinta iyo dhaqan-galinta siyaasad dhaqaale oo tayo leh, kana caawinaya isku-dubaridka khayraadka dalka iyo dibadda iyo fulinta qorshayaasha dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka.
Mahdi Guuleed Khadar
Maxaa looga hadlay kulankii Wasiirka maaliyadda iyo Taliyaha ciidanka xoogga?